Yext: Hal Adeeg oo Goob ah oo Lagu Xukumo Dhammaantood | Martech Zone
Yext: Hal Adeeg oo Goob ah oo Lagu Xukumo Dhammaantood
Arbacada, Juun 20, 2012 Axad, Sebtembar 8, 2013 Douglas Karr
Haddii aad waligaa isku dayday inaad ku diiwaangeliso meheraddaada tiro badan oo ka mid ah bogagga maxalliga ah ee halkaas ka jira, waa waqti-nuugid weyn. Kaliya maahan in degel kastaa ay leedahay habab diiwaangelin oo kala duwan, dhammaantoodna waxay ku faragelinayaan oo kugu ridayaan liisaska kor u kaca. Waxaan ka diiwaangashanay Yext maanta oo waxaan bixinay xirmada PowerListings. In ka yar $ 50 bishiiba, waxay kuu oggolaaneysaa inaad maamusho in ka badan 30 bogagga liistada maxalliga ah dhammaantoodna laga soo bilaabo barxad dhexe.
Waa kuwan shaashadda maamulka oo bixinaysa macluumaadkaaga liistada:
Maaddaama ilo kastaa ay leedahay keydkeeda gaarka ah, waxaa jira 100s oo xog-ururin ah oo ku saabsan macluumaadka maxalliga ah halkaas. Laakiin dhibaatadu waxay tahay, gabi ahaanba waa ay kala go'een, markasta oo xogta la beddelo, si dhakhso leh ayey uga dhacaan iswaafajinta. Xaqiiqdii, celcelis ahaan, 6% ee liistada ayaa isbedelaya bil kasta, natiijada ugu dambaysaana waa in ka badan 20% ee raadinta maxalliga ah ay ku soo laabtaan macluumaad aan dhammaystirnayn oo dhammaystiran isticmaalayaasha. Natiijada ugu dambeysa waa mid aad u jahwareersan ganacsiyada iyo isticmaaleyaasha… Yext PowerListings waxay xallineysaa dhibaatadan weyn iyadoo ay udub dhexaad u tahay natiijooyinka raadinta maxalliga ah dhammaan goobahaas kala duwan oo leh hal nidaam.
Waa kuwan shaashad raadin ah oo aad ka raadin karto si aad u hesho oo ugu xirto liistada deegaankaaga degel kasta:
Daqiiqado gudahood, liistadayadu waxay si firfircoon uga shaqeyneysay dhowr goobood oo aan helno ogeysiisyo emayl ah maadaama kuwa kale toos u socdaan. In kasta oo aynaan rajeyneynin inaan helno daad weyn oo ganacsi ahaan hay'ad ahaan iyada oo loo marayo raadinta maxalliga ah, weli waa muhiim in ganacsigeenna si sax ah loo qoro oo laga helo dhammaan goobahan. Gaar ahaan koritaanka cajiibka ah ee adeegyada ku saleysan goobta aaladaha mobilada. Waxaan dooneynaa in nalaga helo gudaha sida ugu badan qaran ahaan iyo caalami ahaanba. Hadaad tahay ganacsi tafaariiq ah, waa lama huraan!
Interface waa fududahay in la isticmaalo, iyo sidoo kale u oggolaanaysa shirkadaha badan oo meel si ay u maareeyaan goobahooda an Enterprise nooca. Qaado tijaabo tijaabo ah 'Yext' raadinta ganacsigaaga dhamaan goobaha deegaanka. Asxaabtayada mahadsanid EverFffect raadinta!
Tags: maxaliga ahliisaska deegaankaSuuqgeynta Mobilada iyo Mashiinka
Soo bandhigid: Maareynta Ololaha Bulshada ee Dhammaadka-iyo-Dhammaadka
Macaamiisha loogu beddelo U-doodayaal Zuberance
Jun 20, 2012 at 7: 04 PM
Natiijooyin noocee ah ayaad heshay illaa hadda?
Jun 20, 2012 at 9: 15 PM
Weli 24 saacadood ma ahayn, laakiin 21 ka mid ah 35 adeegyada goobta ayaa la diiwaangeliyey, la cusbooneysiiyay, lana daabacay.
Jun 25, 2012 at 3: 07 PM
Aad uma xishoodo! Waad ku mahadsantahay wadaagistaada.
Jun 21, 2012 at 5: 53 PM
Adeegyada goobta maalinta 2 iyo 24 waa la diiwaangeliyey, la cusbooneysiiyey lana daabacay.
Jun 22, 2012 saacadu markay ahayd 10:04 AM
Subaxaan, waxaan helay qoraal ah in SuperPages la daabacay. Taasi waa mid ka mid ah kuwa muhiimka ah ee aan runtii doonayay inaan arko cusbooneysiinta!